Tsy tanjona ny fahombiazana, fa lalan-kaleha. - Zig Ziglar - Pedia Quotes
Tsy tanjona ny fahombiazana, fa lalan-kaleha. - Zig Ziglar
Lasa mahaliana ny fiainana satria samy manana nofy sy filana maro anenjehana isika rehetra. Izy io dia mitazona antsika mazoto ary mamela antsika hiainana toe-javatra isan-karazany amin'ny fiainana izay mahatonga antsika ho tonga olona.
Tokony hametraka tanjona tokoa isika mba hahafahantsika manantona fomba mazava hamita ny nofinofintsika. Saingy tokony hahatakatra ny iray fa tsy tokony hijanona na mametra ny tenantsika isika raha tratrarina ny tanjontsika. Tokony hisokatra hikaroka bebe kokoa isika ary hahafantatra ireo fotoana maro izay efa eo anoloantsika.
Tokony ho tsaroantsika fa ny fahombiazana dia tsy mitovy amin'ny tanjona iray. Na dia tokony ho afa-po amin'ny fiainana aza isika dia ilaina foana ny mitazona ny lelafo - fikatsahana hahafantatra sy hamantatra bebe kokoa. Tsy tokony hampijanona ny tenantsika tsy hahita bebe kokoa amin'ny fiainana isika.
Raha manao fahombiazana ho dia dia lavitra isika, dia hanohy hivezivezy hatrany. Hahatonga ny fiainantsika hanan-karena kokoa izany ary hanampy antsika hahita ireo zavatra mety ho diso. Manatsara ny fiainana izany satria manampy antsika hanana fomba fijery vaovao, olona vaovao ary ahafahantsika mianatra.
Manome antsika handraisana anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny lafiny rehetra azontsika atao koa izany. Raha afaka manome sy manisy fiantraikany amin'ireo izay mila ny fanampiantsika isika dia afaka milaza fa tena nahomby tokoa isika. Averina indray, ity fandraisana anjara ity koa dia manana safidy tsy misy fetra hojerena.
Ny iray dia tsy maintsy mahita fomba foana hahitana fotoana vaovao sy manohy mianatra sy mitombo. Ny fitohizan'ny lalan'ny fianarana hatrany dia tena fahombiazana.
Quotes Inspirational tsara indrindra
Quotes Short Quotes
Quotes miaraka amin'ny sary
Quotes Fahombiazana malaza
Teny ara-tsindrimandry momba ny dia
Teny momba ny fahombiazana
Hetsika antony manosika hahomby amin'ny asa
Teny momba ny fitsangatsanganana sy ny toerana aleha
Teny momba ny fahombiazana sy ny zava-bitany
Teny momba ny fahombiazana sy ny asa mafy
Quotes fahombiazana fohy
Sarin'ny fahombiazana amin'ny Quotes
Teny farany momba ny dia
Fanoharana sy teny lazaina amin'ny fahombiazana
Quotes fahombiazana ho amin'ny asa
Quotes amin'ny fahombiazana
Ajanony ny tahotra ny mety ho diso ary atombohy ny fiheverana izay mety hatao. - Zig Ziglar
Manana fiainana miakatra ny fiainana ary azo ampiharina amin'ny olombelona rehetra izany fahamarinana izany. Araka izany, ...
Matetika ny lalana sarotra dia mankany amin'ny toerana mahafinaritra. - Zig Ziglar
Rehefa mametraka finoana sy fanantenana ary fitiavana ianareo dia afaka manangana ankizy tsara ao anatin'ny tontolo ratsy. - Zig Ziglar
Rehefa mametraka finoana sy fanantenana ary fitiavana ianareo dia afaka manangana ankizy tsara ao anatin'ny tontolo ratsy. - ...
Raha afaka manonofy ianao dia afaka ahatanteraka izany. - Zig Ziglar
Ny nofinofintsika sy ny filantsika no mampaharitra antsika amin'ny fiainana. Mandrisika antsika hitady sy hahomby. All ...
Hisy olona foana eo amin'ny fiainanao izay mitondra anao ny tsy mety. Aza adino ny misaotra azy ireo amin'ny fampahatanjahana anao. - Zig Ziglar
Indraindray dia manana olona manodidina antsika maro isika izay manohy mitsabo antsika amin'ny fomba diso. Ianao ...